ယခုနှစ်တစ်နှစ် အတွင်းမှာပဲ သုံးလေးနှစ်စာလောက် ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်လတ် – Shwe Likes
ယခုနှစ်တစ်နှစ် အတွင်းမှာပဲ သုံးလေးနှစ်စာလောက် ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ တန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်လတ်
သရုပ်ေ ဆာင် ယဉ်လတ် ကတော့ ယခင်က နိုင်ငံေ တာ်အကျိုးပြု ရုပ်ရှင်ဇာ တ် ကားတွေမှာ အများဆုံး ပါဝင်သရုပ်ေ ဆာင် တတ်သူတစ်ေ ယာက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ယဉ်လတ် ဟာ လက်ရှိမြန်မာ့နွေ ဦးတော်လှ န်ရေးမှာလ ည်း အဓမ္မဘက်ကရပ်တည်ပြီး ဆိတ်ဆိ တ်နေခဲ့တာ ပရိသတ်ကြီး အားလုံး လည်းသိပြီး သားဖြစ်မှာပါ။
အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေ ရဲ့ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ရရှိခဲ့တာြ ဖစ်ပြီး ယဉ်လ တ်ကတော့ တစ်နှစ်တည်းနဲ့ ဝေဖန်မှုေ တွကိုကြုံေ တွ့ခဲ့ရတာ တန်တယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။
ယဉ်လတ်က “ခက်ခဲ တယ် .. ဒါပေမယ့် မ င်းအတွက် ကျေနပ်တယ် မေတ္တာထားရင် ရန်သူတောင် မိတ်ဆြွေ ဖစ်လာနိုင်တ ယ်ဆိုသလိုမျိုး ပဲ အရာရာကိုအေ ကာင်းဘ က်ကတွေးရင် ဖြစ်လာသမျှ အခက်ခဲတို င်းသည် လှပနေမယ် ခွန်အားြ ဖစ်စေနေလိမ့်မ ယ်…နှစ်ကုန်တော့ မယ်.. ဒီနှစ်အတွင်း ငါဘာများရလို က်လဲ..?ရတာပေါ့ စိတ်သော ကဖြစ်စရာတွေ , ဒုက္ခတွေ ရလိုက်တာပေါ့ လို့တွေးနေရင် ဒီနှစ်ဆိုတာ ကြီးက အဓိပ္ပါယ်ရှိေ တာ့မှာမဟုတ်ဘူး.. အဲ့လိုတွေးမယ့်အစား…ငါဘာတွေရလိုက်လဲ ? ”
“ရတာပေါ့ အများကြီး…ချစ်တယ်လို ့ပြောပြီး ကျောခိုင်းတဲ့ သူအတွေအကြော င်းသိရတ ယ်။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့အတူ ဘယ်သူေ တွကျန်ခဲ့ လဲသိရတယ်။ ကိုယ်ဘယ်ေ လာက်အထိေ ပျာ့ညံ့တယ် မာကျောတယ်ဆို တာလည်းသိရတယ်။ ဘယ်လို ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ပျော်ရွှင်အောင်ေ နရမလဲဆိုတာ သိရတ ယ်။
အပြုံးတွေသေ သွားပြီလို့ ထင်ခဲ့ပေ မယ့် ခက်ခဲပေမယ့် ငါပြန်ပြုံးနိုင်တာ ကိုလည်း သိရတယ်လို့တွေးလိုက်ရင် ဒီနှစ်က အဓိပ္ပါယ်ရှိ သွားလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အမြ င်ပြောရရင် တကယ်တော့ သုံးေ လးနှစ်စာကို တစ်နှစ်ထဲနဲ့ ကြုံတွေ့ရတာ တန်ပါတယ်ေ လ။ တစ်နှစ်တည်းနဲ့ ရင့်ကျက်သင့်သေ လာက်ရင့်ကျက် သွားတာပေါ့…တန်ပါတယ်…🖤🤍” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
ယဉ်လတ်ကတော့ သူများတွေ သုံးလေးနှစ်စာေ လာက်ခံရမယ့် ဝေဖန်တိုက် ခိုက်မှုတွေကို တစ်နှစ်တည်းနဲ့ကြုံခဲ့ရတာကြောင့် ရင့်ကျက် သင့်သလောက် ရင့်ကျက်သွားတာမို့ တန်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: YIN LET ‘s’s fb
သ႐ုပ္ေ ဆာင္ ယဥ္လတ္ ကေတာ့ ယခင္က နိုင္ငံေ တာ္အက်ိဳးျပဳ ႐ုပ္ရွင္ဇာ တ္ ကားေတြမွာ အမ်ားဆုံး ပါဝင္သ႐ုပ္ေ ဆာင္ တတ္သူတစ္ေ ယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ယဥ္လတ္ ဟာ လက္ရွိျမန္မာ့ေႏြ ဦးေတာ္လွ န္ေရးမွာလ ည္း အဓမၼဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ဆိတ္ဆိ တ္ေနခဲ့တာ ပရိသတ္ႀကီး အားလုံး လည္းသိၿပီး သားျဖစ္မွာပါ။
အဲ့ဒါေၾကာင့္လည္း ပရိသတ္ေတြ ရဲ့ေဝဖန္မႈကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ရရွိခဲ့တာျ ဖစ္ၿပီး ယဥ္လ တ္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ ေဝဖန္မႈေ တြကိုၾကဳံေ တြ႕ခဲ့ရတာ တန္တယ္လို႔ ဆိုလာပါတယ္။
ယဥ္လတ္က “ခက္ခဲ တယ္ .. ဒါေပမယ့္ မ င္းအတြက္ ေက်နပ္တယ္ ေမတၱာထားရင္ ရန္သူေတာင္ မိတ္ေႂဆြ ဖစ္လာနိုင္တ ယ္ဆိုသလိုမ်ိဳး ပဲ အရာရာကိုေအ ကာင္းဘ က္ကေတြးရင္ ျဖစ္လာသမၽွ အခက္ခဲတို င္းသည္ လွပေနမယ္ ခြန္အားျ ဖစ္ေစေနလိမ့္မ ယ္…ႏွစ္ကုန္ေတာ့ မယ္.. ဒီႏွစ္အတြင္း ငါဘာမ်ားရလို က္လဲ..?ရတာေပါ့ စိတ္ေသာ ကျဖစ္စရာေတြ , ဒုကၡေတြ ရလိုက္တာေပါ့ လို႔ေတြးေနရင္ ဒီႏွစ္ဆိုတာ ႀကီးက အဓိပၸါယ္ရွိေ တာ့မွာမဟုတ္ဘူး.. အဲ့လိုေတြးမယ့္အစား…ငါဘာေတြရလိုက္လဲ ? ”
“ရတာေပါ့ အမ်ားႀကီး…ခ်စ္တယ္လို ့ေျပာၿပီး ေက်ာခိုင္းတဲ့ သူအေတြအေၾကာ င္းသိရတ ယ္။ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္နဲ႔အတူ ဘယ္သူေ တြက်န္ခဲ့ လဲသိရတယ္။ ကိုယ္ဘယ္ေ လာက္အထိေ ပ်ာ့ညံ့တယ္ မာေက်ာတယ္ဆို တာလည္းသိရတယ္။ ဘယ္လို ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေ နရမလဲဆိုတာ သိရတ ယ္။
အျပဳံးေတြေသ သြားၿပီလို႔ ထင္ခဲ့ေပ မယ့္ ခက္ခဲေပမယ့္ ငါျပန္ျပဳံးနိုင္တာ ကိုလည္း သိရတယ္လို႔ေတြးလိုက္ရင္ ဒီႏွစ္က အဓိပၸါယ္ရွိ သြားလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အၿမ င္ေျပာရရင္ တကယ္ေတာ့ သုံးေ လးႏွစ္စာကို တစ္ႏွစ္ထဲနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ရတာ တန္ပါတယ္ေ လ။ တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ ရင့္က်က္သင့္ေသ လာက္ရင့္က်က္ သြားတာေပါ့…တန္ပါတယ္…🖤🤍” ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။
ယဥ္လတ္ကေတာ့ သူမ်ားေတြ သုံးေလးႏွစ္စာေ လာက္ခံရမယ့္ ေဝဖန္တိုက္ ခိုက္မႈေတြကို တစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ၾကဳံခဲ့ရတာေၾကာင့္ ရင့္က်က္ သင့္သေလာက္ ရင့္က်က္သြားတာမို႔ တန္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေျပာလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: YIN LET ‘s’s fb
အခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့ စစ်ရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ မေတ္တာတရား ရှေ့ထားပြီး ကူညီပေးစေချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ချမ်းမင်းရဲထွဋ်
လွတ်မြောက်နယ်မြေထဲမှာ အဆင်မပြေတာကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွား ပြီဆိုတဲ့ ဟန်လင်း